ပန်းခြံမှာ အားကစားလေ့ကျင့်သူကို အပေါက်ဆိုးဆိုးနဲ့ ဟန့်တားခဲ့တဲ့ စည်ပင်ဝန်ထမ်း ရဲ့ ဗီဒီယို - ALANZAYAR
ပရိသတ်ကြီးရေ ၊ အားကစားပြိုင်ပွဲတွေ လုပ်ကြပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ်တွေရဲ့ ကျေးရွာ၊ ရပ်ကွက် ၊ မြို့ ၊ နိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုအသင်းကို ပဲ အနိုင်ရစေချင်ကြတာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ ရန်ကုန်မြို့ ပန်းခြံတစ်ခုမှာ အားကစားလေ့ကျင့်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို စည်ပင်က ဟန့်တားခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
ပန်းခြံလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ထီးလေးကွယ်ပြီး ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေကြတဲ့ အတွဲတွေ ၊ မူးယစ်သောက်စားနေတဲ့ သူတွေကို ဟန့်တားတာ ၊ အရေးယူတာတွေမလုပ်ခဲ့ဘဲ ၊ အခုလို သန်ရာအားကစားတစ်ခုကို လာရောက် ဟန့်တား ခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်က အားကစားချစ်ကြတဲ့ သူတွေကို ဒေါသထွက်စေခဲ့တာပါ။
ဟန့်တားခံရတဲ့ အားကစားသမားက အခုလိုလေ့ကျင့်ဖို့အတွက် အထက်အဆင့်ဆင့်ကိုစာတင်ခဲ့ပေမယ့် စည်ပင်က ခွင့်ပြုမပြု အကြောင်းကြားတာမျိုး ပြန်လည်မလုပ်ခဲ့ဘူး လို့ ဆိုပါတယ်။ ယခင်ကလည်း သခင်မြပန်းခြံအပါအဝင် တခြားပန်းခြံတွေမှာ ဆော့ကစားလို့ရပေမယ့်
စည်ပင်က အဆိုပါ ပန်းခြံတစ်ခုတည်းအတွက် ခွင့်ပြုမိန့်မရခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ အားကစားသမား ကို စည်ပင် က ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး ရဲ့ ဖြေရှင်းချက်ဟာ ယုတ္တိမတန်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်. အဆိုပါအကြောင်းအရာကို နိုင်ငံကျော် မာရသွန်သမားဖြစ်တဲ့MYAT THU – Tri Smith က ဖွင့်ချခဲ့တာပါ ။
“Public ပန်းခြံမှာအရက်ထိုင်သောက်နေတဲ့ လူတွေရှိတယ်(လာမတားဘူး)ဆေးအရောင်းအဝယ် လုပ်နေတဲ့ သူတွေရှိတယ်(မသိလိုက်ဘူး)အားကစား လာလုပ်တယ်(ထူးဆန်းတယ်ဆို ခွင့်ပြုမိန့်ရဖို့စာတင်ရမယ်… အန္တရာယ် ရှိလို့တဲ့)ဘယ်အရာတွေက ပိုအန္တရာယ်ရှိတာလဲ?
အားကစား ဝါသနာပါတဲ့ လူငယ်တွေကို အားပေးသင့်တယ်…”မြန်မာ့အားကစား ကမ္ဘာကိုလွှမ်းရမည်”အခု ပန်းခြံတောင်မလွှမ်းနိုင်ဘူးစိတ်မကောင်းဘူး…ဘယ်လို ခွင့်ပြုမိန့်ရအောင် လုပ်သင့်လဲ???အကြံပြုပေးပါ…” ဆိုပြီးရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် ။ ”
အခုလို အားကစားအတွက် ကြိုးစားသူတစ်ယောက်ကို ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်ဟာ အင်မတန်မှ အကျဉ်းတန်တဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ပြီး မှတ်ချက်လေးတွေပေးခဲ့ကြပါဦး။
ဗီဒီယိုဖိုင် Source – MYAT THU – Tri Smith
ပနျးခွံမှာ အားကစားလကေ့ငျြ့သူကို အပေါကျဆိုးဆိုးနဲ့ ဟနျ့တားခဲ့တဲ့ စညျပငျဝနျထမျး ရဲ့ ဗီဒီယို
ပရိသတျကွီးရေ ၊ အားကစားပွိုငျပှဲတှေ လုပျကွပွီဆိုတာနဲ့ ကိုယျတှရေဲ့ ကြေးရှာ၊ ရပျကှကျ ၊ မွို့ ၊ နိုငျငံ ကိုယျစားပွုအသငျးကို ပဲ အနိုငျရစခေငျြကွတာပါ။ ဒီနမှေ့ာတော့ ရနျကုနျမွို့ ပနျးခွံတဈခုမှာ အားကစားလကေ့ငျြ့နတေဲ့ လူတဈယောကျကို စညျပငျက ဟနျ့တားခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျတဈခုထှကျပျေါလာပါတယျ။
ပနျးခွံလို့ဆိုလိုကျတာနဲ့ ထီးလေးကှယျပွီး ဖွဈခငျြတိုငျးဖွဈနကွေတဲ့ အတှဲတှေ ၊ မူးယဈသောကျစားနတေဲ့ သူတှကေို ဟနျ့တားတာ ၊ အရေးယူတာတှမေလုပျခဲ့ဘဲ ၊ အခုလို သနျရာအားကစားတဈခုကို လာရောကျ ဟနျ့တား ခဲ့တဲ့လုပျရပျက အားကစားခဈြကွတဲ့ သူတှကေို ဒေါသထှကျစခေဲ့တာပါ။
ဟနျ့တားခံရတဲ့ အားကစားသမားက အခုလိုလကေ့ငျြ့ဖို့အတှကျ အထကျအဆငျ့ဆငျ့ကိုစာတငျခဲ့ပမေယျ့ စညျပငျက ခှငျ့ပွုမပွု အကွောငျးကွားတာမြိုး ပွနျလညျမလုပျခဲ့ဘူး လို့ ဆိုပါတယျ။ ယခငျကလညျး သခငျမွပနျးခွံအပါအဝငျ တခွားပနျးခွံတှမှော ဆော့ကစားလို့ရပမေယျ့
စညျပငျက အဆိုပါ ပနျးခွံတဈခုတညျးအတှကျ ခှငျ့ပွုမိနျ့မရခဲ့တာလို့ဆိုပါတယျ။ အားကစားသမား ကို စညျပငျ က ဝနျထမျးအမြိုးသမီး ရဲ့ ဖွရှေငျးခကျြဟာ ယုတ်တိမတနျခဲ့တာကိုတှရေ့ပါတယျ. အဆိုပါအကွောငျးအရာကို နိုငျငံကြျော မာရသှနျသမားဖွဈတဲ့MYAT THU – Tri Smith က ဖှငျ့ခခြဲ့တာပါ ။
“Public ပနျးခွံမှာအရကျထိုငျသောကျနတေဲ့ လူတှရှေိတယျ(လာမတားဘူး)ဆေးအရောငျးအဝယျ လုပျနတေဲ့ သူတှရှေိတယျ(မသိလိုကျဘူး)အားကစား လာလုပျတယျ(ထူးဆနျးတယျဆို ခှငျ့ပွုမိနျ့ရဖို့စာတငျရမယျ… အန်တရာယျ ရှိလို့တဲ့)ဘယျအရာတှကေ ပိုအန်တရာယျရှိတာလဲ?
အားကစား ဝါသနာပါတဲ့ လူငယျတှကေို အားပေးသငျ့တယျ…”မွနျမာ့အားကစား ကမ်ဘာကိုလှမျးရမညျ”အခု ပနျးခွံတောငျမလှမျးနိုငျဘူးစိတျမကောငျးဘူး…ဘယျလို ခှငျ့ပွုမိနျ့ရအောငျ လုပျသငျ့လဲ???အကွံပွုပေးပါ…” ဆိုပွီးရေးသားထားတာကိုတှရေ့ပါတယျ ။ ”
အခုလို အားကစားအတှကျ ကွိုးစားသူတဈယောကျကို ပိတျပငျခဲ့တဲ့လုပျရပျဟာ အငျမတနျမှ အကဉျြးတနျတဲ့လုပျရပျတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။ ကဲ ပရိသတျကွီးရေ ဒီဗီဒီယိုလေးကို ကွညျ့ပွီး မှတျခကျြလေးတှပေေးခဲ့ကွပါဦး။
ဗီဒီယိုဖိုငျ Source – MYAT THU – Tri Smith